दशैंमा कम मूल्यका कार किन्ने सोच्नु भएको छ ? यी हुन् ६ विकल्प
6:49 am, मंगलबार, भदौ १०, २०७६
काठमाडौं । दुइपाङ्ग्रे सवारीबाट चार पाङ्ग्रेमा उक्लन चाहाने मध्यम वर्गिय उपभोक्ता प्रायः सस्तो कारको खोजीमा लाग्ने गर्छन् । कार खरिद गर्ने क्रममा उनीहरुमा एक प्रकारको दुविधा हुने गरेको छ । मोटरसाइकल छाडेपछि कुन कार किन्ने ? यसरी सिफ्ट हुने अधिकांसले इन्ट्री लेवलका कार खरिद गर्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि सस्तो तथा माइलेज धेरै दिने कार धेरैको रोजाइमा पर्छ ।
नेपालमा भारतीयदेखि विश्वका चर्चित ब्राण्डका कारसम्म उपलब्ध रहेका छन् । यद्यपी नेपाली बजारमा भारतमा उत्पादित कार नै सस्तो हुने गरेको छ । यसैबीच नेपाली बजारमा उपलब्ध कम मूल्यका कारको विषयमा हामी जानकारी दिदैछौं ।
मारुतीले नेपाली बजारमा बिक्री गर्दै आएको अल्टो एसटीडी नेपाली बजारमा पाइने सबैभन्दा सस्तो कार हो, जसको मूल्य १८ लाख ९९ हजार रहेको छ भने, अल्टो एलएक्सआईको मूल्य २० लाख ९९ हजार र अल्टो के १० भिएक्सआईको मूल्य २२ लाख ८९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, मारुती सुजुकी कै वागेन आर भिएक्सआई अप्सनलको १.० लिटरको २४ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा बिक्री हुदै आएको छ ।
ड्याटशनले २५ लाख मूल्यसम्मका तीन कारको बिक्री गर्दै आएको छ । ७९९ सीसीको गो टी (०) को मूल्य १९ लाख ९९ हजार, ९९९ सीसीको गो टी (०) २१ लाख ९९ हजार र ११९८ सीसीको न्यु गोको मूल्य २५ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा बिक्री हुर्दै आएको छ ।